साइकलले र मोटरसाइकलले अब उपरान्त मासिक यती कर तिर्नुपर्ने ! – Rabin's Blog
विराटनगर, ७ साउन । मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी गाउँपालिकाले साइल र मोटरसाइकलबाट थप कर लिने निर्णय गरेको छ ।गाउँपालिकाले कर उठाउने निर्णय गरेपछि स्थानीयहरू आन्दोलित बनेका छन् । कानेपोखरी गाउँपालिकाले चालु वर्षदेखि प्रतिसाइकल मासिक १ सय र मोटर साइकललाई २ सय रुपैयाँ कर लिने नीतिगत निर्णय नै गरेको छ ।
पञ्चायतकालमा सडकमा गुडिरहेका साइकललाई जबर्जस्ती रोकेर गाउँ पञ्चायत र नगरपञ्चायत उल्लेख गरिएको स्टिकर साइकलको स्पोकमा टाँसेर कर असुली गरिन्थ्यो । मोरङको गापाको यो निर्णय लगत्तै स्थानीय सर्वसाधारण आन्दोलित भएका छन् ।
विजय किस्कुको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय संघर्ष समिति पनि निर्माण गरेका छन् । गाउँपालिकाले सर्वसाधारणलाई मारमा पार्नेगरी गरेको कर निर्धारण फिर्ता नलिए गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेर अवज्ञा आन्दोलन गर्ने संयोजक किस्कुले बताएका छन् ।
होक्लाबारी, केरौन र बयरवन गाविसलाई मिलाएर संघीय संरचनामा निर्माण गरिएको कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङको मध्यभागमा पर्छ ।
प्रचण्ड र केपी ओलीलाई अमेरिकाको ओस्कार अबार्ड ! के मा पाए त ? पुरा हेर्नुहोस
यस्तो भएमा चम्किन्छ अर्जेन्टिनाको भाग्य